GNU CoreUtils, oo beddel u ah BusyBox ee loogu talagalay Android | Laga soo bilaabo Linux
GNU CoreUtils, oo beddel u ah BusyBox ee loogu talagalay Android
Waxa aan ula qabsanay maalinteena ilaa maanta waa aqrinta boggaga internetka anagoo raadineyna warar cusub, codsiyo ugub ah, casharro xiiso leh, iwm.
Si kastaba ha noqotee, marar badan waxaan ka helnaa xitaa macluumaad dheeri ah adoo hubinaya golayaasha oo aan toos u websaydhka, si fiican haddii aad isticmaasho Linux adiguna aqriso Laga soo bilaabo Linuxhadaad isticmaasho Android adiguna aqriso Laga soo bilaabo Android ama hadaad jeceshahay Apple oo aad aqriso ipadized, iyo wixii la mid ah ee nidaamyada kale ee hawlgalka.
Marar badan waa inaan dib u eegno golayaasha si aan u helno wararka, xal u helista dhibaatooyinka ama ciladaha jira, tani waa waxa ku dhacay saaxiib, kaas oo ku helay tan barxadaha XDA-Developers: GNU CoreUtils
2 GNU CoreUtils
Miyaanay kugu dhicin adiga kumbuyuutarkaaga kumbuyuutareedka kuma haysatid amarro badan qaybta aad rabto. BusyBox waxay u jirtaa inay inbadan ku darto terminal-ka Android, waa wax yar oo la fulin karo oo jiray sannado badan (muddo dheer kahor inta loo dhan yahay Android). Sida laga soo xigtay Wikipedia:
BusyBox waa barnaamij iskudarsha koronto badan oo heer sare ah oo loo yaqaan 'Unix yutiil' una dhigma hal yar oo la fulin karo. Waxay awood u leedahay inay bixiso inta badan yutiilitiyada loo cayimay nidaamyada Unix marka lagu daro adeegyo badan oo badanaa lagu arko nidaamyada GNU / Linux.
Busybox waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa nidaamyada ka shaqeeya diskiga ama nidaamyada leh Linux. Waa barnaamij bilaash ah oo shati ku haysta shatiga GNU GPL. Waxaa lagu qeexay "midida ciidanka Switzerland ee nidaamka Linux."
GNU CoreUtils oo ay soo saareen alireza 7991 waa mashruuc beddel u ah BusyBox, laakiin wuxuu bixiyaa amarro badan oo ka badan BusyBox.
105 amarro ayaa shaqeynaya illaa iyo hadda, kaliya 2 ayaa ku jira habka lagu saxaayo hawlgalkooda saxda ah (ls oo igu soo biir), Taasina waxay weli ku jirtaa marxalad hore ee horumarinteeda.
Waxaa lagu dhisay Linaro oo ka fekeraya habeyn dhameystiran oo hagaajineysa waxqabadka, xitaa sidaas oo ay tahay, waa inaad haysataa qalab casri ah (oo la jaan qaadaya ARMv7 iyo sidoo kale ARM NEON), iyo sidoo kale wax iska cad… waa inuu xidid yahay iyo sidoo kale soo kabasho qaali ah oo lagu rakibay.
Si aan u isticmaalno waa inaan ku dheelitirno cu amarka, tusaale ahaan:
cu.echo «Tijaabinta CoreUtils ee loogu talagalay FromLinux»
Ka fikiray sidan oo kale (prepend cu) si aysan uga hor imaan nooca hadda jira ee BusyBox.
Waxaan uga tagayaa iskuxiraha mowduuca kulanka XDA-Developers forum:
Mashruuca GNU CoreUtils
Waan ognahay in Android ay leedahay Linux Kernel oo ordaya, sidoo kale FirefoxOS waxay leedahay fargeeto ah kernel-ka Android (oo isna aan ku celiyo, waa Linux), sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa dib-u-habeyn ee dhab ahaan looga baahan yahay in lagu sameeyo CoreUtils si loo sameeyo ka shaqee FirefoxOS.
Markaa waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la qorsheeyo lana barto barnaamij ka mid ah HTML5 kooxda, laakiin haye, haysashada CoreUtils ee FirefoxOS waxay noqon doontaa tallaabo weyn oo horay loo qaado, FirefoxOS Terminalku weli aad ayuu uga xaddidan yahay midka Android, xitaa ma haysto dufan loo qeybin karo 0_oU
Hagaag, la soco noocyada mustaqbalka ee CoreUtils si loo arko horumarkiisa, ka caawiyo kan ugu weyn (oo aan aaminsanahay hadda kaliya) horumariye helo, iwm.
Waxaan xasuustaa dhowr sano ka hor (markii aanan xitaa hubin Facebook, mana aanan haysan Twitter ama G + ayaa jiray) inaan aqriyay mowduucyo badan oo ku saabsan fagaarayaasha Linux, anigoo fiirinaya xalalka dadka isticmaala siinaya dhibaatooyinka dadka kale, waxaan waxay ila tahay inaan xoogaa dib ugu noqdo waqtiyadaas 😀
Waxaan rajeynayaa inay xiiso laheyd!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » GNU CoreUtils, oo beddel u ah BusyBox ee loogu talagalay Android
Aad ayey u xun tahay inaysan la shaqeynaynin saboolkeygii hore ee Galaxy Ace (Armv6) 🙁 Salaan xD
Waxaan leeyahay terminal leh Firefox OS iyo 1.0 waan xididaystay oo waxaan dhigay sanduuq buuxa oo armv7l ah, markii la cusbooneysiinayo 1.1 way sii jirtaa xidid la'aan. Haddii ay dhacdo terminalkeyga (ZTE Open) wuxuu keenay sanduuq mashquul iyo sanduuq qalab laakiin iyagu sidaa uma dhameystirnayn.
Fikradda waa hagaagsan tahay dhammaantood ayaa la yiri.
Way fiicnaan laheyd inaad kuhesho Firefox OS: p
Ma jiro terminaal ku jira android oo aan tijaabiyey oo gaadha terminaalka mobaylka ee JAILBREAK, wuxuu leeyahay amarro badan oo intaa ka badanna waa lagu dari karaa iyada oo loo marayo cydia (waxay leedahay bash, nmap, nc, ping, openssh, vsftpd, rsync, iwm), waxaan rajaynayaa tan Mashruuca ayaa si dhakhso ah loo isticmaali karaa (in wax la soo hor dhigo amar kasta kama muuqan karo wax ku ool ah) si uu ugu wareego android.
Ku jawaab Aragorn
Hagaag, kaliya busybox-ka waxaad horey u haysataa amarro kugu filan.
Weyn - Waxaan ku tijaabin doonaa Taleefankayga Gacanta.
Waxaan hayaa dhammaan amarrada bash ee debian, gabi ahaanba; waad ogtahay sidee ?: SAHAL, isku xirka ssh ^^
Ku jawaab toño
PiPad: Kiniin lagu farsameeyay qalabka Raspberry Pi
Desktop-ka Linuxero ee ugufiican: Janaayo 2014 - Natiijooyin